Ranieri: Waxaan ahay isla kii ay soo eryeen Giriiga. | Haqabtire News
Ranieri: Waxaan ahay isla kii ay soo eryeen Giriiga.
Claudio Ranieri waxa uu sheegay in Premier League ay ku guuleysatay Leicester City uu yahay caleema saarka waayihii dheraa ee uu sugayey hanashada horyaal her kowaad ah.
Talyaaniga waxa uu soo leyliyey murqo weyn reer Europe ah sida Juventus, Inter iyo Atletico Madrid, laakiin waa dawacooyinka liitay kuwa uu ugu dambeyn ku qabsaday England isaga oo ku hogaamiyey horyaalkoodii ugu horeeyey ee heer kowaad ah.
Isaga oo qabtay xilka tababare ee Leicester kaddib masiibo afar kulan ku habsatay ee uu kala kulmay Greece iyo guul daradii uu kala kulmay jasiirada faroe, Ranieri waxa uu ku adkeysanayaa in wax yar uun iska badaleen qaabkii hogaankiisa ee la xiriiriiay bandhigyadaas liitay iyo la yaabkii uu ka dhigay gegida King Power.
“Waxaan jiraa 64 sano, waqti dheer ayaan dagaalamayey, laakiin mar walba meel wacan ayaan wax ka eegi jiray dhinaceyga,” ayuu Ranieri u sheegay Rai 3’s Processo del Lunedi show.
“Mar waliba waxaan ogaa in aan ku dambeyn doono hanashada horyaal meel uun. Waxaan ahay isla ninkii ay eryeen Giriiga, waliba shaqsi la ilaaway waayihiisa.
“Ma aha in qof ilaawayo, laakiin waxaan tilmaamayaa in aan ahay isla ninkii fadhiyey kursiga keydka ee Giriiga. Isma badalin.
“Waxaan joogayaa Leicester. Kan waa sanad aan dib isga oo kale loo heli doonin, kan dambe waxaan isku dayi doona in aan 10-ka sare u dagaalamo, waan ku rajo weynahay. Waa qasab in aan korno oo wax wanaagsan sameeno.”
Ranieri waxa uu ka soo laabanayey casho uu la soo qaatay hooyadiis oo ku sugan Italy halka ay socotay ciyaarta go’aamisay horyaalka waxa uuna sharaxaad ka bixiyey sida dareenkiisa noqday markii horyaalka uu u soo dhowaaday.
“Marka wax sidan oo kale kuugu dhacaan, ma ogaan kartid. Tottenham iyada ayaa badineysay qeybtii hore, markaa xooga qalbi jab ayaan qabay.
“Hadana markii uu Gary Cahil dhaliyey, waxaan ku fakaray in wax dhici karaan. Waan u dabaal dagay goolkii bar bar dhaca ahaa ee Eden Hazard.”